AVG antivirus 8.0.100 အကြောင်းတစေ ့တစောင်း — MYSTERY ZILLION
AVG antivirus 8.0.100 အကြောင်းတစေ ့တစောင်း
June 2008 edited June 2008 in Antivirus & Virus
AVG Free Version 8.0.100 ထွက်လို ့လာပါပြီ။
April 24.2008 မှာ Deliver လုပ်လိုက်တာပါ။
တော်တော်လေးအဆင်မြင် ့လာတယ်လို ့ပြောလို ့ရပါတယ်။
ထူးခြားတာလေးတစ်ခုကတော့ AVGပာာအရင်က Anti-spyware ကို သီးသန့်ထုတ်ပါတယ်။ သီးသန် ့ဆိုတာ ကလဲ သူများဆီက၀ယ်ထားတာပါ။ သူကိုယ်တိုင်စပြီး လုပ်ခဲ ့တာမပာုတ်ပါဘူး။ အခုအဲဒီ သူ သီးသန့်ထုတ်နေတဲ့Anti-Spyware ကို ဆက်ပြီး မထုတ်တော ့ပါဘူး။ ရပ်ပစ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီ Version ထဲမှာ ပေါင်းထည့် လိုက်ပါတယ်။
- PUP exception
(2)	Link Scanner
(3)	Plug in For Microsoft Office 2000/XP/2003/2007 တွေ ပါလာပါတယ်။
(4)	Command Line ကနေ AVG ကို သုံးလို ့ရပါတယ်။ Parameters အမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော ့။
(5)	Email Scanner အရင်ကထက် ပိုပြည် ့စုံလာပါတယ်။
(6)	Appearance ကတော ့ကြည် ့လို ့တော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်။
အကျယ်ချဲ ့ပြီးပြောကြပါစို ့။
(1) Anti-Spyware ကတော ့ထွေထွေ ထူးထူးပြောစရာ မလိုပါဘူးလို ့ထင်ပါတယ်။ အရင် Anti-Spyware ရဲ့Engine နဲ ့မောင်းပါလိမ် ့မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီ Version က Anti-Virus နဲ့Anti-Spyware တာ၀န်နှစ်ခုလုံးကို ထမး်ဆောင်ပါလိမ့် မယ်။ Spyware Setting နဲ ့ပတ်သက်လို ့ဘယ်မှပြင်လို ့ရမှာမပာုတ်ပါဘူး။ Update လုပ်ပြီး Scan လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။ အရင် Anti-spyware ရဲ့Engine အတို်င်း Fully Function ဖြစ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျ. ။ သူ ့မှာ Feature အသစ်ပါလာပါတယ် ။ PUP exceptions (potentially unwanted program) ပါ။ သူက ဘာလဲ ဆိုတော့AVG ပာာ အရင် Version တုန်းက Suspect ဖြစ်တဲ ့program, freeware , patch file, key gen, etc. တွေဆိုရင် popup menu လေးတွေတက်လာပြီး သတ်မှာလား။ ဘာလားပေါ ့။ အဲဒီတော ့အချိန်ကုန်တာပေါ ့၊မျက်စိရှုပ်တာပေါ ့။ Scan လုပ်တိုုင်းလဲအဲဒါတွေကို အမြဲ scanဖတ်နေပြီး၊ alert ပြနေပါတယ်။ အခု version က ပြင်လိုက်ပါပြီ။ AVG က alert ပြရင််ဆိုရင်ပဲ ကိုယ် က အဲဒါကို စိတ်ချရတယ်ထင်ရင် PUP exceptions ထဲမှာ ထည့် ထားလိုက်ရင် နောက်တစ်ခါမပြတော ့ပါဘူး။ မစစ်တော ့ပါဘူး။
(2) ထူးခြားတာက Link Scanner ဗျ။ သူ ့မှာ Feature နှစ်ခုပါလာတယ်။ AVG active surf-shield နဲ ့AVG search-shieldတို ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Surf-Field(Available only in AVG Professional) ရဲ ့အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ကတော ့virus/malware/code တွေ ကြောင် ့ဖြစ်တဲ့Internet ကနေ ကိုယ်မသိဘဲ accidently download လုပ်တာတို ့နဲ ့တခြား exploits တွေ တားဆီးပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခု Search-Shield(Available in this version) ကတော့Google, Yahoo, MSN တို ့လို Search Engine တွေ နဲ ့real time system အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ ဘယ်လို မျိုးလဲဆိုတော ့Google မှာ တစ်ခုတစ်ခုကို Searching လုပ်ကြည့် လိုက်တယ် ဆိုရင် Google က Searching လုပ်လိုက်တဲ ့Data နဲ ့သက်ဆိုင်တဲ ့Link လေးတွေကို ပြပေးပါတယ်။ အဲဒီ Link လေးတွေကို AVG ကနေပြီးတော့ scan ဖတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အဲဒီ link လေးတွေရဲ ့ဘေးမှာ ဘယ်ပာာက Secure ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အမှန်ခြစ်၊အမှားခြစ်၊ Exclamation mark၊ Question markတို ့နဲ့ ့ပြပါတယ်။ စစ်လို့ု မရဘူးဆိုရင် Question Mark ကို ပြပါတယ်။ Crack/Serials keyတို့ ရတဲ့website အများစုတွေ ကို not secure လို ့သတ်မှတ်ပြီး အမှားခြစ်ပြထားပါတယ်။ Internet မချိတ်ထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ connection ကြန် ့ကြာမှာနေမှာ စိုးလို ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Link Scanner ကို Disable လုပ်ထားလို ့ရပါတယ်။ Note : IE နဲ ့Firefox အတွက်ပဲ support လုပ်ပါတယ်လို ့ပဲ ဇော်ပြထားပါတယ်။
ကျန်တဲ ့Feature တွေကတော ့အရင် Version တွေအတိုင်းပါပဲ။ Email Scanner က ပိုပြည် ့စုံလာပါတယ်။ POP3/SMTP တွေကို support လုပ်ပါတယ်။ Outlook, Eudora, Thunderbird, အစရှိတဲ့email client တွေကို support လုပ်ခြင်းပါ။ SSL (secure socket layer) ကိ်ု support လုပ်တယ်လို ့ဆိုထားပါသေးတယ်။ အဲဒါတော ့မစမ်းကြည် ့ရသေးပါဘူး။ Microsoft Office ကို 2007 version အထိ plug in က support လုပ်လာပါတယ် ။ File Size က 45.5 MB ဖြစ်ပြီး၊ ့စက်မှာနေရာယူမဲ ့Size ကတော့အများဆုံး 40MB ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးကတော ့27.77MB ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Note: Custom installation ပေါ် မူတည်ပြီး Size ကွဲသွားတာပါ။ မလိိုတာတွေလျှော ့ပစ်ရင် တော ့Size နည်းသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်အနေနဲ ့ပြောရရင် ဘယ်Anti-Virus မျိုးမဆို သူ ့ပာာနဲ ့ပာာကောင်းနေပါတယ်။ ပြီးတော ့ဘယ် Anti-Virus မှ 100% အကောင်းဆုံးလို ့ပြောလို ့မရပါဘူး။ အကောင်းဆုံးဆိုတာက ခဏတာပဲနေမှာပါ။ ဘာလို ့လဲ ဆိုတော့နှစ်တစ်နှစ်မှာ သူတို ့ကိုဦးတည်ပြီးတိုက်ခိုုက်လာတဲ ့Virus တွေ Malware တွေ Spyware တွေ က အဆင့်မြင် ့ပြီး အရမ်းများလာတဲ့့အခါမှာ သူတို ့ခုခံနိုင်ရင်တော ့နာမည်ကျနေမှာမပာုတ်ပဲ၊ မခုခံနိုင်ရင် အဲဒီနှစ်မှာ နာမည်ပျက်ပါပြီ။ အဲလို အချိန်မှာ ခုခံနိုင်တဲ့့Anti-Virus က ခုခံနေနိုင်တယ်၊ သူ ့ကိုသုံးတဲ ့PC တွေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ Safe ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Anti-Virus နာမည်တက်လာပါတယ်။ တကယ်တော့အဲဒါပာာ popularity ပါ။ Anti-Virus တွေ မှာ သူ ့ပာာနဲ ့သူ ချိန်ကိုက်ပြီးသား Engine တွေ ပါရှိပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် Symantec (Norton) ပာာ Windows Virus, Dos Virus, Script Virus, macro virus, malware, backdoors, Trojans တွေလိုပာာမျိုးတွေကို ဘယ်လို Protect လုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ ့Formula Engine တွေကိုအကောင်းဆုံး မောင်းထားပါတယ်။ အရင် က 100 % နီးပါးတောင် protect လုပ်နိုင်တယ်လို http://www.av-comparatives.org က သူ ့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေ အရ ဖော်ပြခဲ့ ဖူးပါတယ်။ Engine တအားမောင်းတော့model နိမ် ့တဲ ့စက်ဆိုရင် ၀ပ်သွားတာပေါ ့။ နောက်ပြီး Update နောက်ကျတဲ ့အခါမှာ သူ ့ရဲ့Formula နဲ ့ကွဲပြားတွေ malwre တွေ၊ virus တွေ လာရင် သေပြီဆရာ ဖြစ်သွားရော။ အဲဒီ မှာ Norton က နာမည်စကျလာတာပဲ။ စျေးကြီးတယ်၊ စက်ကို လေးစေတယ်၊ တစ်ခြားပာာတွေနဲ ့သူလိုကိုယ်လိုဖြစ်လာတော့Norton နာမည်ကျသွားတာပါ။ တကယ်တော့Norton ပာာသူများတွေထက်ကောင်းတဲ ့အဆင့် မှာရှိပါတယ်။ Kasperskey ကိုတော ့အခုတလော လူကြိုက်များနေကျတယ်။ Update အရမ်းမြန်တယ်လေ ။ အဲဒီတော့Latest Virus ရန်ကတော ့အေးဆေးပေါ ့။ Function တွေကောင်းလွန်းပြီး ရှုပ်နေတာလေးတစ်ခုပါပဲ ။ ဒီနှစ်တွေက သူနာမည်တက်တဲ ့နှစ်တွေပါ။ AVG ကတော ့ပေါ ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ ့မျက်စိရှင်းလို့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ AVG ပာာ ချက်နိုင်ငံ ကမွေးဖွေးလာပြီးတော ့၊ Kaspersky ပာာ ရုရှား က ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီနေရာမှာ ရပ်လိုက်ပါတော ့မယ်။
Download Link လေးတွေ ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Download လုပ်ပြီး စမ်းကြည့် နိုင်ပါတယ်။ အကြိုက်တွေ ့မှာပါ။
10 Q ပဲပြောမလား..
thank you ပဲပြောမလား... သိတော့ပါဘူး.. ဟီး ဟီး
အိုကွာ... မြန်မာဆန်ဆန်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပေါ့.. :P
ကောင်းလိုက်တာဗျာ...(ရှင်းပြချက်တွေပါ):D........ဖတ်နေရင်းနှင် သုံးနေတဲ ့့kaspersky ကို AVG ပြောင်းချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်....:1:..
spyware အတွက်တော့ တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်...
program တစ်ခုကို run တဲ့အချိန်တိုင် ခွင့်ပြုချက်ရယူမှု
အဲ လေးတော့လေးတယ်ဗျာ .. Memory နည်းတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ မကောင်းဘူးဗျ .. Spyware အတွက်တော့
ကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ... Virus အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ kaspersky ကို မမှီနိုင်ပါ.. Spyware အတွက်
ဆိုရင် Ad-aware SE (Lavasoft) က ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်.. Negative View လို့တော့ ပြောနဲ့
သူရဲ့ Setup.exe ကိုယ်တိုင်တောင် 45 MB လောက်ရှိတယ် ဒါဆိုရင် install လုပ်လိုက်ရင် 70 လောက်ရှိမယ်
Startup မှာ run မယ်ဆိုရင်တော့ သွားပြီးပေါ့
Memory များများလေးသာဆောင်ထား 512 အနည်းဆုံးပေါ့
ကျွန်တော် အကို့ ရေးတာတာတွေကို RL(review library) မှာတင်လိုက်ပါတယ။် အကို Register လုပ်ပြီးပါက အကို့ နာမယ်နဲ့ ပြောင်းတင်ပေးပါ့မယ်။ အခုတော့ Admin အကောင့်နဲ့ တင်ထားပါတယ်။ အဆင်မပြေမှု ရှိခဲလျင် ကန့်ကွက်လိုရင် ပြောပါအကို ပြန်ဖျက်ပေးပါ့မယ်။
70 MB ဆိုတာမပာုတ်ပါဘူး။ သေချာသုံးကြည် ့လိုက်ပါအုံး။ Version မှားလို ့နေမှာပါ။ ကျွန်တော်ပြောနေတာ AVG 8.0.100 Free Version ပါ။ ကျွန်တော့်စက်က 256MB ပါ။ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ Negative version လို ့မမြင်ပါဘူးဗျာ။
ရပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ techincal အကြောင်းကတော ့ဘယ်သူ posting ပါပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ ့အကိုတို ့ပြောတဲ ့RL website ကို ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။ Sharing လုပ်ပါအုံး။
ကျေးဇူးပါ။ review.mmopenlibrary.com RL ဆိုတာ MZ ရဲ့ ထပ်မံပေါက်ဖွားလာတဲ့ သွေးကြောအသစ်ပါ။
review လေးကောင်းတယ်ဗျာ... မဆိုးဘူး... ဖတ်ရတာတော်တော်မိုက်တယ်... အဲလို Review လေးတွေကို ရေးပေးပါအုံးဗျို့..
ကျွန်တော်တွေ့သမျှ မေးကြည့်သမျှ ကွန်ပျူတာသမားတွေ ကတော့ AVG ပြောလိုက်တာနဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့ကြတယ်ဗျ။ သူက ဗိုင်းရပ်တော်တော်များများကို သိပ်မနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တကယ် ဘာမှ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် AVG ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်။ update လုပ်ရတာအဆင်ပြေလို့။ တစ်ပတ်တစ်ခါ နက်ကဖေးသွား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ-စက်ထဲတည့်ရတာဆိုတော့(အွန်လိုင်းချိတ်မထားနိုင်တော့) AVG က အတော်ကိုကောင်းတယ်။ သူများတွေက မနိုင်ဘူးပြောတော့ လန့်တယ်။ ဘယ်လိုသဘောရကြလဲ။
အခုနောက်ပိုင်းရောက်လာလေ... AVGပာာ Latest Virus တွေကို သတ်တာသိပ်ပြီး အားမရလောက်အောင်ပါပဲ။ အဓိက AVG ပာာ သုံးရတာရိုးရှင်းပြီး၊ ပေါ့ ပါးတယ်၊ Free Version ရှိတယ်၊ Update လွယ်တယ်၊ အဲဒါကြောင် ့အများစုက လက်ခံတာပါ။ သူနာမည်စကြီးတုန်းကလည်း Kasperskey နာမည်ကြီးသလိုပါပဲ။ Virus အကုန်လုံးနီးပါးကို နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ့အကြံပေးချင်တာက အဆင်ပြေသာကိုသာ ရွေးသုံးပါ။ တစ်ခုတည်းကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးဖို ့ဆိုတာ အဆင်မပြေနိုင်လောက်ပါဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း Detection Level တက်လာတာက Trust Port,Avira , Gdata ပါ။ Kaspersky နဲ ့AVG ပာာ Level ပွွိုင့် စွန်းလောက်ပဲ ကွာပါတယ် ။ကဲ.....ဘယ်ကောင်က ဘာကောင်လဲဆိုတာ av.comparatives.org မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ av.comparatives.org ပာာ user တွေ သုံးတာကို စစ်တမ်းကောက်ယူတာမပာုတ်ပါဘူး။ သူတို ့က ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးတော့ ့မှ Result အောက် လိုက်တာပါ။
ကျေးဇူးပါပဲ တီဖိုးအမ်။ comparative site လေးက အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ချက်နိုင်တာပေါ့။ လယ်ဗယ်ကို။
:2: version 8 က ချီးမွမ်းလို့မှ မဆုံးသေးဘူး.. ကျွန်တော်တော့ ပြသနာတွေ့ပြီ
Browser တွေခေါ်လိုက်ရင် ဟန်း ဟန်းသွားရော... တော်တော်လေး စောင့်ရတာ... core2တောင် မခံနိုင်ဘူးဟ... :2:
ပာုတ်လားဗျ။ သူများစက်တွေမှာ တော ့ဘယ်မှ ဖြစ်ဘူးဗျ။ အကိုရ။ အဆင်မပြေရင် Link Scanner ကို Disable လုပ်လိုက်ပေါ ့။ ခက်သလားလို ့။